Atileet Leellisaa Deessisaa maraatoonii Niiwu Yoork injifate – Fana Broadcasting Corporate
Atileet Leellisaa Deessisaa maraatoonii Niiwu Yoork injifate
Finfinnee, Onkololeessa 26,2011(FBC)-Dorgommii maraatoonii magaalota garaa garaatti xumura torbee darbee gaggeeffameen Atileetonni Ityoophiyaa milkaa’aniiru.
Dorgommii maaraatoonii dhiirotaa Niiwu Yoorkiin Leellisaa Deessisaa fi Shuuraa Qixxataa wal duraa duuban yoommuu galan, atileetin Keeniyaa Joofreey Kamwooroor 3ffaa akkasumas atileetin Ityoophiyaa biraa Taammiraat Tolaa 4ffaan xumuree jira.
Haaluma wal fakkaatun maaraatoonii dhiirotaa Kooriyaa Kaabaa See’oolitti gaggeeffameenis Asaffaa mangistuu,Taarikuu Kinfee fi Abdallaa Goobanaa wal duraa duuban 1ffaa hanga 3ffaa qabachuun xinjifatanii jiru.
Maaraatoonii Poorton ammoo dubartootan Ababaa Gabramasqal fi Maskarama Abarraa 1ffaa fi 2ffaan bahuun yoommuu injifatan,dhiirotaan Fiqaaduu Kabbadaa 3ffaan xumuree jira.
Dorgommii maaraatoonii Chaayinaa Haangizhuutti gaggeeffameen Hiruut Xibabuu,Tsahaay Dassaalenyfi Siifan Malaakuu sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabachuun injifataniiru.
Bifuma wal fakkaatun Chaayinaa magaala Naanjiingitti maaraatonnii dubartootan Qabbanee Caalaa fi Gannaat Geetnaat 1ffaa fi 2ffaan moo’ataniiru.
Maaraatoonii Xaaliyaan Tooriinoo dhiirotaan Siraaj Ganaa 1ffaa dubartootanis Danbalee Caaffoo 1ffaan xumuraniiru.
Afrikaa Kibbaatti maaraatoonii dhiirotaa Sooweetton Sintaayyoo Laggasaa 1ffaa, Dafaa Ifaa 3ffaan xumuree jira.
Maaraatoonii dubartootaa Morookoo Laayooneetti gaggeeffameen Tsiggee Hayilee,Masarat Dinqee fi Soofiyaa Shamsuu 1ffaa hanga 3ffaa qabachuun xumuranii jirau.